Mondial 2018 : Zara raha nisy 30 ireo nitsena ny ekipam-pirenena breziliana
Sakaizan’ny mpandresy. Eo am-piandrasana ny manasa-dalana izay hanomboka anio, dia efa miverina any an-tanindrazany ireo ekipam-pirenena nihintsana. Raha noheverina ho sangany tamin’ireo mpandray anjara ry zareo Breziliana, dia nody teo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana izy ireo …Tohiny
Hiarahan’ny gitara maro : Mpanakanto ampolony hamerina ny « Gilitabe »
Niainga tamin’ny tenin-jatovo. Teny iray entina hilazana ny gitara ny « Gilita ». Mpanakanto fantatra eo amin’ny fitendrena io zava-maneno io araka izany no hiaraka hiaka-tsehatra hamerina ilay seho « Gilitabe ». Seho tokony notanterahina …Tohiny
Hetsiky ny mpianatra teny Vontovorona : Nirefotra ny baomba, mpianatra telo nosamborina
Nitokona indray ny mpianatra eny amin’ny Polytechnique Vontovorona omaly. Tonga teny an-toerana ny Emmo-reg ary raikitra ny fifandonana, ka niafara tamin’ny fanaparitahana ireo mpianatra tamin’ny alalan’ny baomba mandatsa-dranomaso. Ny tsy fankasitrahana ny mikasika ny rafitra …Tohiny
Raharaha kidnapping : Jiolahy roa voasambotry ny polisy
Jiolahy ikoizana miisa roa fantatra amin’ny anarana hoe Gérard sy Gilbert no voasambotry ny polisy misahana ny ady heloka bevava etsy Anosy tany amin’iny faritr’Ankazobe iny ny faran’ny herinandro lasa teo. Ankoatra ny asa ratsy …Tohiny
Raha nanontaniana mikasika ny fanatanterahana ny Filankevitry ny minisitra mitety Faritra ny Filoha Hery Rajaonariampianina dia nanambara ny tenany fa Fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka no ilaina. Fitondram-panjakana mihaino ny vahoaka, manatanteraka ny faniriana na/sy fangatahan’ny ...Tohiny